China Deadend Strain Mwekota Maka ABC Neutral Messenger PAL1500 Nlụpụta na Factory | Ike Wangyuang
Oge njedebe nke mmechi maka ABC Neutral Messenger PAL1500
Ngwa Ngwa USB: 50-70mm2(mm sq)
• Weed proofed na ihu igwe UV na-eguzogide ọgwụ naịlọn plọg eriri iko ihe;
• Ike dị elu Aluminom alloy;
• ọdụ igwe anaghị agba nchara;
• Adabara nje, nkuku ma ọ bụ ala na-edu ndú akara;
• Ọ dịghị mkpa ngwaọrụ, nrụnye dị mfe;
• kwekọrọ na ihe NFC 33-041 chọrọ
• Omenala size dị n'elu arịrịọ.
Oge njedebe PAL1500 ejiri ya iji jigide isi ma ọ bụ alaka LV ABC USB iji kwụnye osisi, ụlọ elu akara ma ọ bụ mgbidi dị n'akụkụ nkuku na-agba ma ọ bụ na-eduga n'okporo ụzọ mgbe eriri LV ABC bụ 50mm2, 54.6mm2, 70mm2. Ihe mgbochi ndị a na - egbochi ihe nwụrụ anwụ kwesịrị ekwesị maka gburugburu mmetọ ikuku siri ike ma rụpụta ya site na nnukwu ike alloy na ihu igwe na ihu igwe na UV na - eguzogide ọgwụ naịlọn na - etinye eriri iko osisi, Nnukwu esemokwu dị ọkụ na - eme ka galvanized steel.Cogged n'ime ọwa mmiri na - egosi ezigbo kọntaktị kọntaktị, Ihe mkpuchi nke USB si otú a na-emepụsị iwepụ na mmetụta nke mmachi a pụrụ ịdabere na ya, a na-anwale ya ma kwado ya ka o wee kwado ụkpụrụ niile maka ngwa USB. Igwe anaghị agba nchara ọdụ dị maka arịrịọ ndị ahịa.
Pịnye Nọmba PAL1500
Nọmba Katalọgụ 212550D1
Ihe - Ahụ Nnukwu ike Aluminom Alloy
Ihe - Wedge Ihe ngosi ihu igwe na UV na-eguzogide ọgwụ naịlọn na-agbanye iko iko
Ihe - ọdụ Igwe anaghị agba nchara 201 (Hot itinye kpaliri ígwè dị)
Akinggbaji Ibu Ibu 15kN
Ọkọlọtọ NFC 33-042; EN 50-483
Ngalaba obe (Max) 70mm2
Ngalaba obe (Min) 50mm2
Cross ngalaba (nso) 50-70mm2
USB dayameta (Max) 14mm
USB dayameta (min) 11mm
USB dayameta iche 11-14mm
Ọnụ ọgụgụ nke USB Na-alụbeghị di
Ntuziaka maka njigide Deadend
Isi nke 1 - Tydị ụdị njigide nke njedebe
Isi nke 2 –Nke wuo Atụmatụ nke Deadend nje mwekota
Isi nke Atọ - Akụkụ nke ngwakọta nke njedebe
Ibu nke 4 - Uru nke ngwaahịa nke mgbatị na njedebe
Ibu Nke Abụọ - Nrụpụta Ihe Nrụpụta Ihe Nwụrụ Oge
1. A na-awụsa shea site na mgbochi oxidation akwa-ike aluminum alloy.
2, Wedge isi mkpuchi mesikwuru plastic.
3, Ikwesighi igbacha akwa mkpuchi, na mkpuchi aluminium isi waya n'ozuzu.
4. Wedge ekara Ọdịdị, mfe na a pụrụ ịdabere na echichi.
Chapter 3 - Components nke Deadend nje mwekota
Ngwunye mpempe akwụkwọ na-agụnye ihe na-anwụ anwụ na-agbanwe aluminom na nkedo nke plastik na-edozi onwe ya maka ijikọta ihe na-anọpụ iche .Mkpukpo ahụ na-eme ka corrosion na-eguzogide aluminom alloy die casting die, steel steel crosswalk, wedge-shaped weathering resistant, UV Igwe anaghị agba nchara na-enye ohere itinye ihe mgbochi na mgbodo. ABC erughị ala mwekota na ABC mgbodo nwere ike iji naanị ma ọ bụ na Nchikota.
Ike dị elu, njigide a pụrụ ịdabere na ya. Ike nkedo nke eriri waya ekwesighi ịbụ ihe na-erughị 95% CUTS Mgbasa nkesa nke eriri clamps na waya gbagọrọ agbagọ bụ otu, na-enweghị mmebi nke waya ahụ agbagọ, ikike mgbochi nke eriri agbagọ agbakwunyere, na ndụ ọrụ nke waya na-agbatịwanye. Nnukwu ntinye na ịrụ ọrụ dị mfe. Nwere ike belata oge owuwu ahụ, na-enweghị ngwaọrụ ọ bụla, otu onye nwere ike mezue ọrụ ahụ. Echichi ntinye nke eriri waya dị mfe iji hụ, enwere ike iji anya ya lelee ya, ọ nweghị ọzụzụ pụrụ iche achọrọ.Ọfụma mmebi ahụ, họrọ ihe dị elu. Ngwongwo ahụ kwekọrọ na waya, nke na-eme ka o doo anya na eriri waya nwere nguzogide siri ike nke corrosion electrochemical.
Nke gara aga: ABC Nwụrụ Anwụ End Strain Mwekota PA1500
Osote: Suspension mgbodo N'ihi ABC USB AB16
Oge njedebe nke mgbatị PAL1500
Aluminium Alloy Alloy erughị ala PA1500
Mgbaaka High Ike Aluminium Alloy Erughị ala mwekota
Nwụrụ anwụ ọgwụgwụ nje mwekota maka ABC Neutral ozi PAL1500 Nwụrụ anwụ ọgwụgwụ nje mwekota
Ọrụ Anchoring mwekota N'ihi ABC USB LA1
ABC Nwụrụ Anwụ End Strain Mwekota PA1500
Anchor mwekota N'ihi Onwe Nkwado ABC USB JNS
Suspension mwekota N'ihi Self Kwado ABC USB ...
Suspension mwekota N'ihi Self-akwado ABC USB ...
ABC Suspension Mwepu VSC4-2 4x (50-120) mm sq